Ibhulashi yePeyinti yeDiy, ibrashi yeNayiloni yepeyinti, ipholiyesta yepeyinti yebrashi- YINGTESHENG
Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu, "umgangatho ongaphezulu kwako konke" uhlala uqeqeshiwe kwingqondo yomqeshwa.
IYTS inabasebenzi abangaphezu kwama-300, kubandakanywa abayili abaziingcali, iinjineli. Sinobuchule bokuvelisa izinto ezintsha kunye neemveliso ukubonelela abathengi ngeemveliso ezilungileyo.
Ukubonelela ngeNkonzo yoMgangatho
YTS iye yaxhotyiswa ngaphezulu kwe-100 iiseti semi-oluzenzekelayo kunye oluzenzekelayo ibrashi kunye novavanyo izixhobo, nto leyo ukuphucula ubuchule YTS imveliso kakhulu.
I-YTS inabasebenzi abangaphezulu kwe-150 abenza iworkshop kwaye sonke siye saqonda ukusebenza kwemigca yokuzihambisa ngokuzenzekelayo. Uyilo lweendawo zokusebenzela zilungelelaniswe kwaye zinengqiqo.
Ngo-2005, ukuqaliswa kwetekhnoloji kunye noomatshini kwavumela i-YTS ukuba yandise ishishini layo ukupeyinta indawo yebrashi. Kwakuloo nyaka, i-YTS yaseka ikomkhulu layo-umvelisi kwiQingyuan Industrial Park, indawo yedolophu yaseBaoding, eHebei. Ihlala ngaphezulu kweenyawo ezingama-700,000 zeenyawo, ezenziwe sisityalo sokwenza i-bristle ebilisiweyo, isityalo sokuzoba intambo, isebe lokwenza isiphatho, ukwenza ibrashi…
YTS Synthetic intambo 002
YTS Synthetic intambo 003
YTS Synthetic intambo 004
YTS Synthetic intambo 005
Uluhlu lwe-YTS Flat Trim 001
Uluhlu lwe-YTS Flat Trim 002
Uluhlu lwe-YTS Flat Trim 003
Uluhlu lwe-YTS Flat Trim 004